၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိသည့် Ulefone Power3ဖြစ်သည် Androidsis
၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့် Ulefone Power3ဖြစ်သည်
များစွာသောစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအနက်များစွာသောသူတို့သည်တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာလက်ရှိယှဉ်ပြိုင်မှုတွေအကြား၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီသည် ၄ ​​င်းတို့ထုတ်သည့်ပစ္စည်းအသစ်တိုင်းတွင်အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ရန်ကြိုးစားကြသည်.
Ulefone သည်တရုတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအများပြည်သူကြိုက်နှစ်သက်သောတည်နေရာကိုရှာဖွေသည်။ ထိုအဘို့, သူကအသုံးအများဆုံးနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်အားနည်းချက်များကိုတစ်ခုမှာစမတ်ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်: စမတ်ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ... ကောင်းပြီ, ဒီတစ်ကြိမ်, Ulefတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အားပါဝါစီးရီးမှစွမ်းအား ၃ ကိုယူဆောင်လာသည်. သင်က၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်းပြီးသား?
Ulefone Power စီးရီးသည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသောစမတ်ဖုန်းများမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော၏ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည် Ulefone ပါဝါ 2ဘက်ထရီ 6.050mAh ပါရှိသည်။ အားသွင်းစရာတစ်ခုတည်းဖြင့် ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အသက်ရှင်မည်။
Ulefone ပါဝါ 3
ကောင်းပြီ၊ ကျန်တော့မနေခဏလေးမသွားဖို့လိုတယ် Ulefone Power3တွင် 6.080mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည် တစ်နေ့တာအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုချက်များအားလုံးကိုသည်းခံရန်။ ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ခုကမြန်တဲ့အားသွင်းနည်းပညာပါရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒါကဘက်ထရီသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ ဒီ terminal ၌ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များရှိပါတယ် ၎င်းသည်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောစမတ်ဖုန်းရှိလိုသူတိုင်းအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
၆ လက်မ ၁၈: ၉ FullHD + (18 x9pixels) မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ, \_ t ဒီဖုန်းဟာဂိမ်းကစားခြင်းနဲ့မာလ်တီမီဒီယာတို့အတွက်အတော်လေးသင့်တော်ပါတယ်.
လည်း 23Ghz ရှစ် core Core Mediatek P2.5 Helio ပရိုဆက်ဆာကိုထည့်သွင်းမည်, 6GB RAM မှတ်ဉာဏ်၊ LED Flash ပါသည့် 21 နှင့်5megapixels ၏အနောက်ဘက်ကင်မရာ၊ LED Flash နှင့်လည်း 13 နှင့်5megapixels ၏ရှေ့ကင်မရာ၊ အကယ်၍ ၎င်းလုံလောက်မှုမရှိပါက Face ID ကကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုဖွင့ ်၍ ဖွင့်နိုင်သည် ငါတို့မျက်နှာ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ သင့်ပစ္စည်းသည် Face ID မဟုတ်လျှင်၊ ပါဝါ3တွင်နောက်ဘက်မြို့ပတ်ရထားလက်ဗွေဖတ်စက်ရှိသည်.
အခြားအင်္ဂါရပ်များအကြား, Ulefone Power3တွင် Android 7.0 Nougat ရှိသည်Android 8.0 Oreo ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်မျှော်လင့်ထားသော်လည်း
ဒီပစ္စည်းအဖြစ် AW8736 ပေါင်းစပ် chipset ကို HiFi အသံ ၎င်းသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသံအရည်အသွေးကိုရရှိစေသည်။
စျေးနှင့်ရရှိနိုင်မှု Ulefone Power 3
သင်သည်ဤ terminal ကိုဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်မှ စတင်၍ ကြိုတင်ရောင်းချမှုစနစ်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့် Ulefone Power3ဖြစ်သည်
LEAGOO M9 အသစ်ကိုအထူးလျှော့စျေးဖြင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ပါ